Microsoft nandefa Visio ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Navoakan'i Microsoft ny Visio ho an'ny iOS
Ny suite an'ny iOS an'ny Microsoft dia tsy mitsaha-mivelatra. Vao tsy ela akory izay ny orinasa dia nanambara fa misy amin'ireo rindranasa birao malaza ananany mankamin'ny sehatra finday an'i Apple: Visio. Ho an'ireo tsy mahazatra, Visio dia fitaovana fanaovana sary malaza sy azo itokisana izay ahafahan'ny mpampiasa mamorona sy mijery ny sary feno pitsopitsony. Ankehitriny, mamorona kinova ho an'ny iPad i Microsoft, ary koa amin'ny Internet hafa. "Visio Viewer" ho an'ny iPad izao dia misy ary mamela ny mpampiasa hizara ny kisary am-pilaminana.
Araka ny filazan'i Microsoft, “ny sary Visio dia matetika misy data izay mety tsy ho hitan'ny mpanjifa amin'ny efijery kely kokoa. Namboarina ho an'ny fampisehoana Retina an'ny iPad, Visio Viewer ho an'ny iPad dia mitondra kalitaon'ny fampisehoana lehibe. Miaraka amin'ny traikefa fikarohana vaovao, ohatra, ny mpitantana ny zavamaniry dia afaka mandefa olana amin'ny famokarana avy amin'ny toerana lavitra, ny mpanolotsaina ara-bola dia afaka mandinika ny fizotran'ny asa amin'ny antsipirian'ny fizotran'ny fampindramam-bola rehefa mitsidika ireo mpanjifa erak'izao tontolo izao… ". Nanamafy ihany koa i Microsoft fa hanao ny laharam-pahamehana iPhone "amin'ny volana ho avy" i Visio.
Miaraka amin'izany, Cortana ho an'ny iOS koa dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao madio sy tsotra izay mampifangaro zavatra matetika ampiasaina toy ny fampahatsiahivana na ny toetr'andro. Midika koa izany fa ny famoronana na fijerena fampahatsiahivana dia tena mora sy haingana ny fidirana. Ireo fampahatsiahivana ireo, mazava ho azy, dia mbola mifandrindra amin'i Cortana amin'ny PC na solosaina findainy Windows 10 ihany koa. Ny karatra Cortana koa dia nandalo fanadiovana lehibe.
Ankoatry ny fandinihana ny fisehoana dia nanatsara ny fampiharana ihany koa i Microsoft, ahafahan'ny mpampiasa mahita valiny haingana kokoa. Ny fanavaozana vaovao dia ho hita amin'ny andro ho avy amin'ny Android sy iOS. Nanolotra an'i Cortana ho an'ny mpampiasa UK ihany koa i Microsoft tamin'ny farany, fahatongavany antenaina na dia efa herintaona mahery aza ny fampiharana no nanjary tany Etazonia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Navoakan'i Microsoft ny Visio ho an'ny iOS
Super Mario Run dia mila fifandraisana Internet mitohy
Linia no lalao App Store mandritra ny herinandro